Peni Rudzi Vagadziri & Vatengesi - China Peni Rudzi Fekitori
Yakanyungudutswa Hydrogen Meter-DH30
DH30 yakagadzirirwa zvichienderana neASMM Standard Test nzira. Icho chirevo chekutanga ndechekuyera kuwanda kweiyo yakanyungudika hydrogen pane imwechete mhepo yemvura yakachena yakanyungudutswa hydrogen. Iyo nzira ndeyekushandura iyo mhinduro ingangoita mukati mekusungwa kwewakanyungudika hydrogen pa25 degrees Celsius. Chiyero chepamusoro muganho uri kutenderera 1.6 ppm. Iyi nzira ndiyo yakanyanya nyore uye inokurumidza nzira, asi zviri nyore kupindirwa nezvimwe zvinoderedza zvinhu mumhinduro.
Kushanda: Yakachena yakanyungudutswa hydrogen mvura yekuyera kuyerwa.
Yanyungudutswa Oxygen Meter / Ita Meter-DO30
DO30 Meter zvakare yakadaidzwa seDissolve Oxygen Meter kana Dissolve Oxygen Tester, ndicho chishandiso chinoyera kukosha kweakisi yakanyungudutswa mumvura, iyo yanga ichishandiswa zvakanyanya mukushandisa kwekuyera kwemvura. Inotakurika DO mita inogona kuyedza iyo yakanyungudika okisijeni mumvura, iyo inoshandiswa muminda yakawanda senge aquaculture, kurapwa kwemvura, kuongorora kwezvakatipoteredza, mutemo werwizi zvichingodaro. Yakarurama uye yakagadzikana, ine hupfumi uye inyore, iri nyore kuchengetedza, DO30 yakanyungudutswa okisijeni inounza iwe zvakanyanya nyore, gadzira chiitiko chitsva chekunyungudutswa kweoksijini kunyorera.
Yanyungudutswa Ozone Tester / Meter-DOZ30
Shanduko nzira yekukasira kuputswa ozone kukosha nekushandisa matatu-electrode system nzira kuyera: nekukurumidza uye kwakaringana, kuenderana kusvika kune DPD mhedzisiro, pasina chero reagent inodya. DOZ30 muhomwe yako ishamwari yakangwara kuyera ozone yakanyungudika newe.
Yemahara Chlorine Meter / Tester-FCL30
Iko kushandiswa kweiyo matatu-electrode nzira inokutendera iwe kuti uwane iyo yekuyera mhedzisiro nekukurumidza uye nenzira kwayo pasina kushandisa chero colorimetric reagents. FCL30 muhomwe yako ishamwari yakangwara kuyera ozone yakanyungudutswa newe.
Amoniya (NH3) Tester / Meter-NH330
NH330 mita yakadaidzwawo seammonia nitrogen mita, ndicho chishandiso chinoyera kukosha kweammonia mune mvura, iyo yanga yashandiswa zvakanyanya mukushandisa kwekuyedza mhando yemvura. Inotakurika NH330 mita inogona kuyedza ammonia iri mumvura, iyo inoshandiswa muminda yakawanda senge aquaculture, kurapwa kwemvura, kuongorora kwezvakatipoteredza, mutemo werwizi zvichingodaro. Yakarurama uye yakagadzikana, ine hupfumi uye inyore, inochengetedza, NH330 inounza iwe zvirinyore, gadzira chiitiko chitsva cheammonia nitrogen application.
(NO2-) Dhijitari Nitrite Meter-NO230
NO230 mita inonziwo senitrite mita, ndicho chishandiso chinoyera kukosha kwe nitrite iri mvura, iyo yanga yashandiswa zvakanyanya mukushandisa kwekuyera kwemvura. Inotakurika NO230 mita inogona kuyedza iyo nitrite mumvura, iyo inoshandiswa muminda yakawanda senge aquaculture, kurapwa kwemvura, kuongorora kwezvakatipoteredza, mutemo werwizi zvichingodaro. Yakarurama uye yakagadzikana, ine hupfumi uye inyore, nyore kuitisa, NO230 inounza iwe zvirinyore, gadzira chiitiko chitsva che nitrite application.
Dhijitari ORP Meter / oxidation Kuderedza Inogona Meter-ORP30
Chigadzirwa chakanyatsogadzirirwa kuyedza redox kugona iyo iwe yaunogona kuyedza zviri nyore uye kutsvaga kukosha kwemamilivoliv yechinhu chakaedzwa. ORP30 mita zvakare yakadaidzwa se redox inogona mita, ndicho chishandiso chinoyera kukosha kwe redox kugona mune mvura, iyo yanga ichishandiswa zvakanyanya mukushandisa kwemhando yekuyedza mvura. Inotakurika ORP mita inogona kuyedza iyo redox inogona mumvura, iyo inoshandiswa muminda yakawanda senge aquaculture, kurapwa kwemvura, kuongorora kwezvakatipoteredza, mutemo werwizi zvichingodaro. Yakarurama uye yakagadzikana, ine hupfumi uye inyore, iri nyore kuitisa, ORP30 redox inogona inounza iwe zvirinyore, gadzira chiitiko chitsva che redox inogona kushanda.
pH Meter / pH Muedzo-pH30
Chigadzirwa chakanyatsogadzirirwa kuyedza pH kukosha iyo iwe yaunogona kuyedza zviri nyore uye kutsvaga iyo acid-base kukosha kwechinhu chakaedzwa. pH30 mita inonziwo acidometer, ndicho chishandiso chinoyera kukosha kwepH mune mvura, iyo yanga ichishandiswa zvakanyanya mukushandisa kwekuyedza mhando yemvura. Inotakurika pH mita inogona kuyedza acid-base mumvura, iyo inoshandiswa muminda yakawanda senge aquaculture, kurapwa kwemvura, kuongorora kwezvakatipoteredza, mutemo werwizi zvichingodaro. Yakarurama uye yakagadzikana, ine hupfumi uye inyore, iri nyore kuchengetedza, pH30 inounza iwe zvirinyore, gadzira chiitiko chitsva cheasidhi-base application.
Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Ph Sensor Electrode, Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Chlorophyll Sensor, Kufambisa TDS Sensor,